Iiraan oo ku eedaysay Mareykanka inuu doonayo fadhi degdeg QM inay ka yeelato dalkeeda – Radio Daljir
Janaayo 3, 2018 7:12 b 0
Hogaamiyaha sare ee diinta dalka iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa ku eedeeyey cadow dibadda ah inay doonayaan inay sii kiciyaan qalalaasaha ka jira dalka Iiraan, iyadoo rabshadaha dowladad looga soo horjeedo ee kasocda dalkaasi ay tirada dadka ku geeriyooday ay gaartay 20-qof.
Hadalka wadaadka ugu sareeye Iiraan Cali Khamaney ayaa yimid, kadib maalintii Talaadadii oo dowladda Mareykanka ay sheegtay inay raadinayso fadhi degdeg ah oo QM ay uga wada hadlayaan mudahaaraadka kasocda wadanka Iiraan.
Khudbaddii ugu horaysay ee uu jeediyo Aayatulahi Cali Khamey ayuu ku sheegay” Cadowga Iiraan oo isbahaystay inay adeegsanayaan ujeedooyin kalle duwan oo ay ka mid tahay lacag, hub, siyaasad iyo sirdoon, si’ ay usii kiciyaan khalalaasha ka jira dalka Iiraan.
Ku dhowaad sideed qof ayaa ku geeriyooday Isniintii lasoo dhaafay kaliya , sida warbaahinta dowladda laga soo xigtay, waxaana rabshadaha soo bilowday ilaa 28kii bishii December ee dalkaasi Iiraan ay ka dhigaysaa 22 qof oo dhimasho ah.
Wakiilka Mareykanka ee QM Nikki Haley
Madaxwaynaha Mareykanka Donald Trump, oo bartiisa Twitterka soo dhigay qoraal kooban ayaa ku eedeeyey xukuumadda Tehran masuuliyadda rabshadaha kasocda dalkaasi, isagoona baaq u diray dadka cabashada dhigaya, waxaana uu ku sheegay inay kasoo horjeedaan wuxuushnimo iyo musuqmaasuq, “Iiraaniyiinrta waxa haysta cunto yari, sicir barar iyo xuquuda banii’aadamka oo aanay haysan” ayuu yiri madaxwayne Trump.
Wasaaradda arimaha dibadda ee Iiraan oo ka jawaabaysa hadalka madaxwaynaha Mareykanka ayaa ku sheegtay inuu waqti isaga luminayo farriimo iyo aflagaaddo uu kasoo dirayo Twitter, waxaana u wanaagsanaan lahayd inuu diiradda saaro wax u qabashada dadka hoy la’aanta iyo gaajada ku hayso dalkiisa ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay wasaaradda arimaha dibadda ee Iiraan.
Nikki Haley, wakiilka Trump ee QM ayaa sheegtay dowladda Mareykanka inay raadinayso fadhi degdeg ah oo Golaha Ammaanka ee QM ay ka yeeshaan wadanka Iiraan xaaladda kasoo cusooboonaaday iyo xuquuqda aadanaha dalkaasi, waxaana ay sheegaty shacabka Iiraan inay doonayaan xoriyad, dhammaan dadka qadiyaddan danaynaysana ay ku garab istaagaan Mareykanka go’aanka uu qaatay, sida ay sheegtay wakiilka Mareykanka ee QM.